MindMapping sy fiaraha-miasa ho an'ny orinasa | Martech Zone
MindMapping sy fiaraha-miasa ho an'ny orinasa
Talata, May 22, 2012 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Ny mpanjifanay, Mindjet, dia nanangana tolotra vaovao natao manokana ho an'ny orinasa. Ho fanampin'izay, nandefa fanavaozana ny Connect izy ireo fitantanana ny fiaraha-miasa vokatra - mitondra fampidirana feno manerana ny tranonkala, birao ary fitaovana finday amin'ny fotoana rehetra, na aiza na aiza fiaraha-miasa (sy a tranonkala vaovao hifanaraka amin'ireo vahaolana vaovao).
Mindjet Connect V4 dia manohy ny fivoaran'ny vokatra hanomezana traikefa ho an'ny mpampiasa tokana izay mampifandray ireo hevitra sy drafitra amin'ny fanatanterahana ireo drafitra ireo.
Mahazo izao ny mpampiasa Mindjet Connect
Ny fivezivezena ambony eo anelanelan'ny singa Vision and Action an'ny Connect, mamorona traikefa tokana sy tsy mitombina izay miaraka amin'ny fiaraha-miasa mba hamoronana hevitra, paikady ary drafitra, miaraka amin'ny fahaizana manome sy manara-maso ny hetsika amin'ny alàlan'ny fanatanterahana sy ny fahavitana.
Famantarana tokana tsotra amin'ny alàlan'ny Google sy Facebook hahazoana fidirana haingana sy haingana amin'ny vokatra
Fifandraisana amin'ny vokatra amin'ny horonan-tsary mifandraika
Fampitomboana fitehirizana azo ampiasaina ho 2GB ho an'ny Basic / 5 GB ho an'ny orinasa
Ho avy tsy ho ela! Mindjet Connect fampidirina amin'ny Android
Ao anatin'ny fivoaran'ny Mindjet ny orinasa dia manambara fanolorana vaovao natokana manokana ho an'ny orinasa, ekipa ary olona tsirairay izay maneho mazava kokoa ny fomba fampiasan'ny orinasa Mindjet ho fiaraha-miasa. Ireo tolotra vaovao ireo dia mifantoka amin'ny fanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpanjifa. Ny tolotra rehetra dia misy MindManager, Rindrambaiko Desktop malaza an'i Mindjet, ary rindranasa finday Mindjet.
Mindjet dia natao ho an'ny fikambanana mila izany fiaraha-miasa amin'ireo ekipa anatiny sy mpiara-miasa ivelany marobe, manolotra ny fiaraha-miasa sy ny serivisy matihanina mifototra amin'ny rahona sy eo an-toerana.
Afaka mifindra haingana izao ny mpiasa hevitra momba ny drafitra ary avy eo dia tanteraho avy hatrany amin'ireo drafitra sy asa ireo na amin'ny rahona ampahibemaso (amin'ny alàlan'ny Connect) na amin'ny tontolo SharePoint azo antoka (amin'ny alàlan'ny Mampifandray SP).
Mindjet koa dia misy modely vahaolana sy consulting miaraka amin'ny fiofanana fanampiny, serivisy matihanina ary serivisy ho an'ny mpanjifa laharam-pahamehana.
Mindjet ho an'ny ekipa dia ho an'ny departemanta sy vondrona izay te hiala haingana amin'ny hevitra ka hatramin'ny drafitra ho amin'ny fanatanterahana. Mahazo ny MindManager mahery an'ny Mindjet ireo mpiasa miaraka amina endri-tsaina mafonja sy fandaharana, modely Vision sy Action an'i Mindjet Connect, ary ireo rindranasa finday malaza an'i Mindjet hahafahan'izy ireo miara-miasa sy mizara asa na aiza na aiza toerana, sehatra na fitaovana.
Mindjet ho an'ny isam-batan'olona dia vokatra tonga lafatra ho an'ireo mpiasa fampahalalam-baovao izay mila mamorona hevitra, mitantana vaovao ary mizara izany asa izany amin'ny hafa. Ireo matihanina dia mahazo MindManager matanjaka an'i Mindjet miaraka amina endri-tsaina mafonja sy fandaharana miaraka amin'ny Mindjet Connect sy ny finday hizara asa na aiza na aiza toerana, sehatra na fitaovana.
Midira ho an'ny Mindjet izao… maimaim-poana ny kaonty fototra!
Tags: fiaraha-miasamifandrayorinasaMindjetmindmappingsehatrafitantanana tetik'asasharepointekipafitaovana
Antontanisa momba ny fanafohezana URL an'ny bogus an'i Google
Media sosialy - Fahombiazana tsy hay refesina?